The Ab Presents Nepal » म प्रधानमन्त्री भए भने नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुन्छ : डा. भट्टराई
काठमाडौं -: प्रचण्ड–बाबुराम एक समयको चर्चित जोडी हो । तर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई विपरित दिशामा रहेका छन् । भट्टराईले आफ्नो पार्टी काठमाडौंको मःम पसल जस्तो नभएको बताउँनु भएको छ ।
बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूराना पार्टीहरु भन्दा पार्टी फरक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो,हामीलाई तपाईहरु काठमाडौमा खोलिएका १० वटा पसलमा अर्को थपिएर ११ औं बने जस्तो होइन । मःम पसल थपिए संस्था बढ्ने हो ।तर टेस्ट पुरानै । हाम्रो पार्टी त्यो होइन । नयाँ टेस्टसहित हो ।
एक फरक प्रशंगमा अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको ब्याख्या गर्नुभएको छ । दुई तिहाइको सरकारबाट जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नभएको भन्दै जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेकाले यो सरकारबाट आशा गर्नु व्यर्थ हुने दाबी गर्नुभयो । सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत कुनै काम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो सरकारबाट के आशा गर्ने, यो सरकारको काम देखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरियो । संघीय समाजवादी फोरम पनि त्यही बाटोमा छ । केही गर्छ कि भन्ने सबैको आशा सरकारले गलत साबित ग‍र्यो ।’ संयोजक भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले लिएको बाटो गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो